Gawaarida Tünektepe C iyo Gawaarida Bulshada ayaa ku qulqulaya booqdeyaasha Bayram | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaTünektepe Teleferik iyo Xarumaha Bulshada ee Maalinta
06 / 09 / 2017 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, Gondola, TELPHER
Tünektepe Cable-ga iyo Xarumaha Bulshada, oo ay degmada Metropolitan ku deeqday fursad ay ku daawato shimbirta indhaha ee magaalada Antalya, waxay martigalisay qiyaastii 20 kun qof intii lagu jiray Eid al-Adha. Fasaxii bayramiga ah ee loogu tala galay dadka Tünektepe waxay ku riyaaqeen aragti qurux badan ee Antalya.
Tünectepe gaari iyo xarun bulsheed ayaa gooyay cagaha dadka reer Antalya in ay u dabbaaldegaan Ciidul Adxa. Tünektepe, oo marti-galisay kumanaan qof oo ajnabi ah iyo kuwa ajnabiga ah, waxay la kulmeen maalintoodii ugu ballaadhnayd intii lagu jiray fasaxyada. Muwaadiniinta reer Antalya, iyo sidoo kale fasax ka yimid Tünektepe ka daawaday aragtida gaarka ah ee magaalada. Xaruntu waxay martigalisay qiyaastii 20 kun qof intii lagu jiray Ciidul Adxa. Muwaadiniinta, oo ay weheliyaan aragti qurxoon ee Teleferik Café, baahi cunto iyo cabitaan oo laga helay alaab qiimo leh ayaa qiime jabtay. Booqashooyinka Tünektepe sidoo kale aad ayey ugu faraxsan yihiin khibradda gaadhiga. Ka dib markii uu ku noolaa Yurub mudo sanado ah, Gülşen Köşker wuxuu degay Antalya wuxuuna yidhi, "Baabuurta telefishanka waa qurux badan. Waxay ku habboon tahay Antalya. Ilaa hadda, ma jirin meel aan ka daawan karno Antalya cagahayaga. Durba, luul ah ee Antalya Turkey. Cuntada iyo cabitaanka ayaa sidoo kale aad u dhaqaale badan. Waxaan hubaa inaan martida martigalinayo u soo diro Tünektepe. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada caasimadda ".
Songül Nail, oo u timid inay ka soo booqdaan magaalada Ankara, ayaa sheegay, ilem My family yimid Antalya sanad walba. Waxaan tegayaa Tünectepe markii ugu horeysay. Goob gaar ah. Waxay si fiican uga fikireen wiishka. Markii hore waxaa la gaari karaa wadada, laakiin ma uusan doorin. Hadda waxaan si fudud u heli karnaa baabuurta telefishanka. Waxaan dooneynay inaan aragno Antalya ".
Adem Aksoy oo ah 10-sano jir ah, oo markii ugu horreysay u taga Tünektepe, isaga oo wata farsamoyaqaankiisu, "Markii ugu horeysay, waxaan u qaadaa gaari telefishanka Tünektepe. Aad baan u faraxsanaa. Ma aanan fileyn wax sidaas oo kale ah. Waan ku riyaaqay wax badan. Muuqaalku waa qurux. Ma jirin fursad sidaas oo kale ah markii aan horay u imaanay Antalya. "
QIIMEYNTA WAXAY LEEYAHAY
Shirin Şekerci ayaa yiri, "Tünektepe waa mashruuc aad u qurux badan, waxaan jeclahay wax badan, waxaan qabaa in qof waliba arko. Waxay ahayd waxoogaa jeex ah ka hor inta aanan imaadin laakiin waxay ahayd khibrad aad uwanaagsan. Antalya waa magaalo weyn. Magaaladu waxay ku sii fiicnaanayaan mashaariicdaas
Halil Özgür, oo ku nool Ankara iyo wuxuu sheegay in uu yimaado Antalya sannad kasta; "Goob aad u fiican, afka ayaa weli furan. Waxaan jeclaa xaqiiqda ah in ay ahayd degmo iyo qiimaha macquul ah. Waa meel ay qof waliba ka faa'iidi karto mutnuniyet.
Bayramt Boztepe Waddada Baabuurta Raaceen Rakaabka
Bursa Uludağ Ciidda booqdayaasha
Boorashka lacag la'aanta ah ayaa daadadey Antalya
Cable Carafka Cagta
10 65 Thousand People ayaa loo soo celiyay Boztepe